Sintomy ny Gloster Meteor T Mk 7.5 FSX & P3D - Freeware
Ny Gloster Meteor no fiaramanidina miaramila voalohany niditra tao amin'ny fanompoana an'i United Kingdom. Izy irery no fiaramanidina ampiasain'ny tafiky ny Mpiray dina nandritra ny Ady Lehibe Faharoa. Efa ho 4,000 ny kopia namboarina, ny sasany amin'izy ireo dia nahazo alalana ary nampiasain'ny firenena am-polony, nandritra ny taona 1950.
Gloster Meteor T Mk7 maromaro no navadika ho serivisy any UK ary ny orinasa Belzika SABCA dia nanova fito ho an'ny Air Force Belzika. Fiaramanidina belza efatra na dimy no efa namidy tamin'i Israel. Ny orinasa Martin-Baker dia nampiasa ny telo tamin'izy ireo, ny roa amin'izy ireo dia miasa ankehitriny.
Ny paikadin'ny loko valo tafiditra ao dia noforonin'i Peter Watkins.